काठमाडौंमा म कसलाई मतदान गरौं
सुमना श्रेष्ठ print
मेरो काठमाडौंप्रति ठूलो सपना छ। मसँग ज्यूँदो आशा छ कि ७० वर्षको हुँदा म रङ्गीचङ्गी बंगलामा कैद भएको हुँने छैन, बरू म फलैंचामा बसेर ७२ वर्षको छिमेकी दाजुसँग कुराकानी गर्न सकूँ।
म पाँच वर्षको हुँदा र चालिस वर्षको हुँदा जस्तो ताजा बिहानी हावा मेरो फोक्सोमा भरिन्थ्यो त्यस्तै ताजा हावा भरियोस् भन्ने चाहन्छु। काठमाडौंले मेरा लागि प्रदान गरेको त्यो सुरक्षा, मित्रता र समाज जहाँ मैले जस्तै मेरा बच्चाहरूले पनि बिहान बिहानै दौडँदै गएर पच्चिस पैसा प्रतिगोटा पर्ने ̒ग्वालामारी ̓ किनेर खाने अवसर पाउन सकून्।
अनि बिना डरत्रास मैले खेल्ने गरेका चोक अनि बहालहरूमा उनीहरूले पनि खेल्न र साइकल सिक्न सकून्। आफूलार्इ आवश्यकता परेको बखतमा मेरा बुबाआमाले जस्तै मैले पनि सहयोगका लागि छिमेकीलार्इ बोलाउन सकूँ। म मेरो काठमाडौं पहिले जस्तै बिहानीको सूर्यमा चम्केको देख्न चाहन्छु।
जहाँ मैले हरेक दिन अग्ला अग्ला पहाडको शक्ति नजिकबाट हेर्न सकूँ, जहाँ म प्रत्येक दिन हिँड्ने बाटाहरू सफा होउन् र मैले श्वास फेर्ने हावा स्वच्छ होस्। त्यसै गरी निष्कलङ्क बागमती र विष्णुमति वेगले बगेको अनुभूति गर्न सकौं, जहाँ मानिसहरू खुशीले आफूलार्इ मन परेको काम गर्न व्यस्त रहुन्, जहाँ मलार्इ चढ्नका लागि ठूलो रातो बस होस् र मेरो नीलो स्कुटरले सेवा निवृत्ति पाओस्।
जहाँ १४ वर्षे किशोर किशोरीले आफ्नो परिवारको सहयोगका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता नबनोस् । हामी बाँच्नका लागि बाँचौं न कि खान लाउनका लागि। त्यहाँ हामी ती दिनहरूमा फर्कँन सकौं जहाँ कुनै जातियता नहोस् केवल मानवता मात्र होस्। हो, त्यहाँ त्यस्तो समय पनि थियो जहाँ कुनै जातजाति थिएन। जहाँ हामीले हामी भन्दा फरक मान्छेहरूलार्इ स्वीकार गर्न सकौं र जहाँ मानिसहरू आफ्नो आत्मिक स्वयंलार्इ प्राप्त गर्नका लागि आउँन्।
मसँग साँच्चै यस्तो सपना छ जुन जीवन्त छ र जसले मलार्इ घच्घच्याइराखेको छ। यस्तो स्थानको खोजी गर्दै, यसलार्इ यस्तो बनाउनका लागि, नेपाल फर्किंएँ। मैले यहाँबाट टाढा भए पनि प्रत्येक दिन यस्तो सपना देखेँ।
मैले देखेको यो अदृश्य साँचो आगामी चुनावले काठमाडौंको मेयरलार्इ हस्तान्तरण गर्नेछ। अब के गर्ने भन्ने त्रासले म जीवनमा पहिलो पटक डराएको छु। आगामी पाँच वर्षमा काठमाडौंका लागि म कसलार्इ विश्वास गरौं? मैले यी हरफहरू कोर्दै गर्दा यो धुलोमाटोमा मडारिइराखेको छ, सहयोगका लागि रोइराखेको छ, पानीका लागि तिर्खाएको छ र आफू हुँदै गुज्रँनेहरूका लागि आफ्नो हरियालीपूर्ण सुन्दरता र दया देखाउनका लागि यो आतूर छ। यहाँ कोही छ जसले मेरो काठमाडौंको यो आर्तनादलार्इ सुन्न सकोस्?
लाग्छ कि यहाँ धेरै सपनावाजहरू भ्रममा छन् । हामीलार्इ थाहा छैन कसलार्इ भोट दिऔं, किनकि सबैले एउटै परिवर्तनका लागि प्रतिज्ञा गरेका छन्। जब समर्थन गर्ने समय आउँछ, कसलार्इ समर्थन गर्ने? किनकि हामी सबैसँग एउटा मात्र भोट छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिमा नयाँ जोश, शक्ति र युवाको आशा चाहिन्छ; पाठ सिकेको, असफलताका मार्गहरू र अनुभवीहरूका विवेकहरू; व्यक्तिले नेतृत्व गरेको भन्दा पनि भिजनले नेतृत्व गरेको समूह चाहिन्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको एकताले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छ जहाँ समूहमा देखिन नचाहने व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक अभियानका लागि बाहिर निस्कने र जित्नका लागि भोट माग्ने खुराक प्राप्त गर्नेछन्। शायद, त्यसपछि मात्र मैले देखेको सपनाको शहरमा म आनन्दसँग निदाउन सक्नेछु ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १३, २०७४ १२:२६:५८